Nokia 8 wuxuu bilaabaa inuu helo Pie Android | Androidsis
Marka ay bilooyinku sii socdaan, tirada aaladaha la cusbooneysiinayo si ay ula jaan qaadaan nooca ugu dambeeya ee Android, lambarka 9aad, ayaa sii kordhaya, in kasta oo aysan ku jirin heerka ay jecel yihiin ragga Google. Nasiib wanaag Google, Huawei P20 waxay horeyba u bilaabeen mashiinka si ay u bilaabaan cusbooneysiinta u dhiganta.
Maanta waxa la gaadhay Nokia 8, oo ka mid ah noocyada xiddigood ee shirkaddu soo saartay sanadkii hore. Sida aan ku aqrin karno qoraalka uu daabacay Juho Sarvikas, Agaasimaha Waxsoosaarka HMD Global, Waxaan hadda ku raaxeysan karnaa Android 9 dhammaan marinnada HMD Global ee loo yaqaan Nokia 8.
Bishii Nofeembar 30, Sarvikas wuxuu mar kale ku dhawaaqay akoonkiisa Twitter-ka in la soo bandhigay cusbooneysiinta Nokia 8 ilaa Android Pie dhibaatooyin kala duwan, kuwaas oo ay ku qasbeen inay dib u dhigaan daah-furka maalmo kooban. Nasiib wanaagse, waxay ahayd inay dhaafaan oo keliya 20 maalmood, wax shaki ku jirin in la mahadiyo.
Nokia 8 ayaa suuqa soo galay bishii Sebtember 2017 wuxuuna suuqa ku galay Android 7.1.1. Wax yar ka yar sanad ka hor ayaa loo cusbooneysiiyey Android Oreo haddana waxay ku sameysaa Android Pie, markaa tani waxay noqoneysaa casriyeyntii ugu dambeysay, aragti ahaan, in terminaalkan uu heli doono.
Xilligan la joogo garan mayno waa maxay wararka ka iman doona gacanta cusboonaysiintaan ilaa ay ka bilaabaneyso inay gaarto boosteejada, maadaama hal shay uu yahay ku dhawaaqistiisa iyo mid kale waa marka ay gaarto wadamada Nokia 8 la galiyay suuqa.
Terminal-kii ugu horreeyay ee shirkadda Nokia ee cusbooneysiiya Android Pie wuxuu ahaa Nokia 7.1 Plus, oo ah terminal kaas wuxuu ka mid ahaa barnaamijka beta-ka nooca cusub ee Android kaasoo si rasmi ah suuqa ugu jiray in ka badan 4 bilood.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Nokia 8 wuxuu bilaabaa inuu helo Android Pie
Sida Loogu Guuleysto Lacagta Dhabta Ah Ee Lagu Ciyaarayo Tartanka Dharka Mobilada